Doorashada aqalka hoose oo ka socota magaalada Garoowe. – Radio Daljir
Doorashada aqalka hoose oo ka socota magaalada Garoowe.
Diseembar 10, 2016 11:19 g 0
Garoowe, Dec 11 2016–Magaalada Garoowe ayaa waxaa si rasmi ah uga bilaabatay doorashada aqalka hoose ee barlamaanka Soomaaliya oo lafilayo in maalmaha soo socda lasoo gabagabeeyo.
Doorashadaani ayaa waxaa lagu dooranayaa ilaa 11 xildhibaan sida uu qorshuhu yahay, inkastoo uu jiro khilaaf u dhexeeya qaar kamid ah beelaha iyo gudiga doorashada dadban ee heer Puntland.
Doorashadaan ayaa kusoo aadaysa xilli uu jiro khilaaf u dhexeeya beelaha qaar iyo gudiga doorashada heer Puntland oo isku maandhaafsan qoondada haweenka, kadib markii odayaasha beelahaas lagu wargeliyey inay soo xulaan musharixiin haween ah.
Dhanka kalena ra’iisul wasaaraha Soomaaliya Cumar Cabdirashiid oo Garoowe gelinkii dambe ee shalay soo gaarey ayaa sheegay in ladhammaynayo cabashada Puntland ee xildhibaanada Soomaaliland kasoo helaya Sool, Sanaag iyo Buuhoodle.
DHEGEYSOGoob jooge ka warbixinaya qarax saaka kadhacay Muqdisho.
Gudiga doorashada heer federal oo qaadacay doorasho shalay kadhacday Jowhar.